Waxqabdka 2009 | Somaliland Nordic Relief
Mashruucan dhimirku waxa uu ku sahabsan yahay sidii Somaliland loogu samayn lahaa siyaasad cad oo ilaalisa xuquuqda dadka qaba xanuunada dhimirka. Mashruucan oo bilaabmay march 2009 socona doona ilaa februari 2011 ayaa ssannadkii koowaad la soo gebagebeeyay. Si loo gaadho himilada guud ee mashruuca waxa cimibaadhis lagu sameeyay xaaladda dhimirka ee dalka oo dhan. Waxa kale oo la sameeyay siminaaro iyo wacyigalin taas oo lagu martiqaaday siyaasiyiinta, qareenada iyo cid kasta oo wax ka qaban karta sidii dadka dhimirka qabaa ay u heli lahaayeen xuquuqdooda muwaadinnimo. Waxa siminaarada lagaga hadlay waxyaalaha sababa dhimirka kuwa ugu waawayn oo ay ka mid yihiin qaadka oo la wada og yahay xaalkiisa, gudniinka fircooniga ah oo la ogaaday in naxdintiisa iyo xanuunkiisu uu hablaha qalbigooda nabar ku reebo, waliba hablaha baadiyaha deggen ee bilaa suuxdinta lagu gudo. Waxa kale oo tababar la siiyay culimada iyo dadka kale ee daaweeya dadka qaba dhimirka si ay u kala gartaan qofka qaba xanuun caadiya iyo qofka jin ama sixir uu ku keenay xanuunka. Mashruuca waxa labada sano ee socon doono ku bixi doonta 846 000 swedish crowns oo u dhigmaysay markii miisaaniyadda la sameeyay 100 000 oo dollar. Mashruuca waxa fulinaya ururka GAVO (General Assistance and Volunteers Organization).
Mashruucan ku sahabsan cudurka halista ah ee HIV/AIDS-ka waxa aan ka bilownay magaalooyinka Burco, Sheekh, Berbera, Hargeysa, Wajaale iyo Boorama march 2008 waxana la soo gebagebeeyay februari 2010. Mashruuca waxa fulisay hay´adda waddaniga ah ee aan wadashaqayno ee GAVO, waxana ku baxday lacag dhan 541 000 oo swedish crowns oo u dhigmaysay qiyaastii 85 000 oo dollar markii miisaaniyadda la sameeyay.
Waxyaalaha mashruucu fuliyay waxa ay kala yihiin:
3. Waxa la qalabeeyay xafiiska SAHAN oo ah dalladda guud ee Somailand ee kulmisa ururada la dagaalama cudurka. Waxa kale oo laga caawiyay SAHAN sidii ay u samayn lahayd siminaaro ku sahabsan dabagalka iyo iskudubbaridka hawlaha ay qabtaan ururada ka shaqeeya la dagaalanta cudurka.